December 2, 2021 - Written by Editor
Boosaaso:- Guddoomiyaha Gobolka Bari Ahna Guddoomiyaha Guddigga amniga Gobolka Mudane Senator Cabdisamad Yuusuf Maxamed Abwaan, ayaa maanta shir guddoomiyey shirka amniga Gobolka Bari ee Todobaadlaha ah. Shirka ayaa Todobaadkan waxa looga hadlay xaallada guud ee amniga Gobolka Bari iyo amniga magaalada Bosaaso waxaana laga soo saaray qodobo muhiim ah.
1- Guud ahaan ciidamada amaanka ayaa laga bilaabo maanta waxa ay how-gallo ka fulin doonnan guud ahaan xaafaddaha magaalada Bosaaso.
2- Ciidan aan how-gal amni ku jirrin oo hubeeysan inaan lagu arrki karrin magaalada gudaheedda.
3- Guddigga amnigu waxa uu si gaar ah ulla-socddaa dadka caadeystay fallaalka kicinta iyo been-abuurka lagu kicinayo amniga bulshada waxaana lagu qaban doonaa gacan adag. Shirka ayaa waxa ka soo qeyb galay dhammaan guddiga aminga Gobolka Bari.
Guddoomiye Mudane Senator Cabdisamad Abwaan, ayaa markii uu soo dhammaaday shirku ka warbixiyey qodobaddii looga hadlay shirka waxa uuna adkeeyey in laga shaqeeyo nabad-galyada iyo xasiloonida Gobolka iyo magaalada Bosaaso qof waliba masuuliyada ka saaran tahay.
XAFIISKA WARFAAFINTA MAAMULKA GOBOLKA BARI.